Ngaba iikati zinxibelelana njani? - Iikati General Info
Ngaba iikati zinxibelelana njani?
Kukho umbono wokuba iikati azizizo izilwanyana zasentlalweni, ubuncinci xa kuthelekiswa nezinja ezichaza ngakumbi imeko yabo yeemvakalelo kwezinye izinja. Amakati aneendlela ezininzi zokunxibelelana ezizodwa ngokukhethekileyo.
Ubomi boLuntu beekati
Amakati angaba izilwanyana ezizodwa kuba baye bavela kwiinkulungwane ukusuka kookhokho babo basendle ukuze bazingele amaxhoba. Ngenxa yokuba uhlobo lokuzingela izilwanyana lubandakanya ukunganyamezeli kunye nokuhamba ngokukhawuleza ukukothusa nokubamba amaxhoba, ukuzingela kuphela yeyona ndlela isebenzayo yokuphumelela. Iikati zikwindawo kunye nezinye iikati, nokuba kukwindlu enye, ezinokubangela uxinzelelo kunye nembambano.
Iimpawu zePati zokuKhulelwa ezingabonakaliyo
Kutheni Kubalulekile Oku?
Ukuba uyazibuza ukuba ingaba yonke le nto inxulumene njani nombuzo wokuba iikati zinxibelelana njani, konke oko kusekwe kubume boluntu. Ukuze 'kugcinwe uxolo' iikati zinayo ubudlelwane obuntsonkothileyo nezinye iikati . Obu budlelwane busekiwe ngonxibelelwano lwabo ngokwamaqela eekati ezihlala kunye neekati ezingaphandle kweqela labo. Unxibelelwano lwekati phakathi kwezinye iikati lunokuhlelwa ngokwamacandelo amathathu athi onke ahambelana nobudlelwane babo beekati.
Unxibelelwano lweKati oluSekelekileyo
Njengezinja, iikati zinamandla okuva ivumba kunathi. Ziyefana nezinja ekubeni zinelungu elizinikele ekusebenziseni ivumba elibizwa ngokuba yi Ilungu likaJacobson , engafumanekiyo ebantwini. Basebenzisa amandla abo okuphucula ukunxibelelana nezinye iikati.
Ukujongana neukutshiza ikatingokuqinisekileyo iyacaphukisa. Nabani na ophethe iikati angakuxelela ukuba kunzima kangakanani ukulahla.
Isizathu soku kuziphatha kunukayo yimizamo yekati yoku bhengezani ummandla wakhe kwezinye iikati, nokuba ziikati kwindlu enye okanye iikati ezingadibaniyo ngaphandle kwekhaya lakho.
Ngokutshiza umchamo, kwaye ngamanye amaxesha ilindle, kwiindawo ezime nkqo ezinje ngeendonga neengcingo, lo ngumyalezo omkhulu, ocacileyo kwezinye iikati ukuba zihlale ngaphandle kwendawo yakhe.
Kungenxa yesi sizathu le nto indlela yokuziphatha yokutshiza ihlala ifumaneka kumakhaya eekati ezininzi, ngakumbi amadoda angachazwanga, naxa iikati ezivela ngaphandle kwekhaya zizula zisiya kwipropathi yakho kwaye zicaphukisa ikati ehlala kuyo.
Ukurabha ezinye iikati
Enye indlela iikati ezisebenzisa ngayo ivumbaukunxibelelana nabanyekukhuhla omnye komnye.
Oku kuhlikihla kubonakala kwiindawo ezijikeleze intloko nentamo yazo. Oku kwaziwa njenge 'bunting.'
Xa iikati zidibana, zikhona ukutshintshiselana ngeepheromones ukusuka kwabo amadlala ivumba nezinye iikati kwaye kukuziphatha okuqhelekileyo kobuhlobo.
Unokubona iikati zihlikihla ngokuchasene nefenitshala yakho, iindonga kunye namanye amabala athe nkqo kwaye oku kufana nokutshiza. Ikati isebenzisa iipheromones zayo ukubanga umhlaba wayo.
Ukunxibelelana kweekati ngoLwimi loMzimba
Iikati zisebenzisa ulwimi lomzimba ngeendlela ezifihlakeleyo nezimangalisayo zokuba 'nencoko' kunye nezinye iikati. Abantu abafundiswanga kwiiziseko zekati ebonakalayobahlala bedidekile yinto eyenzekayo kwaye baphose imiyalezo phakathi kweekati zabo ezinokubonisa ubuhlobo, uloyiko, ixhala okanye ubundlongondlongo.
Imiqondiso yobuhlobo phakathi kweekati
Ukuba iikati zibonisa ukusebenzisana okuhle nezinye iikati, uya kuqaphela ezi nguqu zilandelayo kulwimi lomzimba wazo:
Iindlebe ziya kuba phambili
Umsila omileyo onokuthi ungcangcazelele okanye unyuke kodwa ubonakale ukhululekile
Abafundi abaxineneyo emehlweni, abanokubonisa ubukrakra, ngokusekwe kwezinye iimpawu zomzimba
Ulwimi lomzimba ngokubanzi kunye namacala abo kunye nasemva kujongeka kukhululekile kwaye uboya babo bubukeka buqhelekileyo
Ngamana ucoce kunye / okanye uhlikihle omnye komnye
Ulwimi oluxhalabisayo phakathi kweekati
Ikati eziva ixinezelekile bubukho wenye ikati iya kubonisa imikhwa ethile. Oku kuhlala kubonakala xa kuziswa ikati entsha ekhayeni, okanye ikati enye ixhaphaza enye ikati. Le miqondiso ibonakalayo yile:
Iindlebe zinokubuyela umva, nangaphambili ezibonisa ukuba bayalumka kwimeko-bume yabo
'IiHackles' ziya kuba phezulu, oko kuthetha ukuba uboya babo bujongeka ngathi buhambela phezulu kwaye busasazeka kude omnye komnye
Oboya beme nkqo buya kubonakala emsileni, umsila ubotshelelwe phantsi komzimba wabo
Abafundi baya kwandiswa
Umqolo wabo unokugoba, okanye ungababona behlisa umzimba wabo emhlabeni
Iimpawu ze-Inter-Cat zoNgcungcuthekiso
Iikati eziukuhamba ngendlela ehlaselayokwezinye iikati ziya kubonisa unxibelelwano olubonakalayo olucacileyo. Lo ngumyalezo kuwe ongenelela ukuthintela nakuphi na ukwenzakala kwiikati kunye nokukhusela ikati elikhuselayo ngakumbi ekoyikeni ngakumbi kunye noxinzelelo. Ukuba enye yeekati zakho ibonisa oku kuziphatha kwezinye iikati okanye zombini ikubonisa, kuya kufuneka ucinge ngokuqhakamshelana no indlela yokuziphatha yekati okanye indlela yokuziphatha kwezilwanyana ngoncedo ngokwakha imvisiswano phakathi kwamafeline akho.
Iindlebe ziya kubhekiswa umva kwaye ziya kubonakala zixinzelelwe entloko
Umsila uya kuhamba ngokuhamba ngokukhawuleza, okunyusa ubundlobongela bekati
Abafundi baya kuthintelwa
Emuva kuya kuba 'nokuqhekeka' okubonakala ngathi uboya babo busasazekile kwaye buphume
Emuva kuya kujongeka kuhleliwe
Ulwimi lomzimba ngokubanzi luya kubonakala lucolile kwaye luqinile
Unxibelelwano lweVocal phakathi kweekati
Indlela yokugqibela iikati ezinxibelelana ngayo nezinye iikati kukusebenzisa izandi ezahlukeneyo ezinokuthi ziqale ukonwaba zisoyike zibe nochuku. Ezinye iikati ziya kuba 'ziyathetha' kunabanye ngokusekwe kubuntu babo kunye nokuzala.
I-Yowling, okanye i-caterwauling, yenzeka xa uneekati ezingachazwanga kwayelixesha lokukhwelana. Zombini iikati ezingamadoda nabasetyhini ziya kungcangcazela xa zibona ubukho zenye. I-Yowling nayo ingangxola, ngakumbi njengeekati ezishushu kunye abafuna amaqabane basondele omnye komnye.
I-Yowling inokwenzeka kwakhona xa ikati yakho ikhonaUkukhathazeka nokugula okanye iintlungu.
Elinye ixesha uyakuva ukugcuma kuxa iikati zifuna ukulwa okanye sele zilwa.
Njengokubhomboloza, iikati zisenza isandi xa zibona enye ikati ingena kwindawo yabo. Zombini luphawu lokukhathazeka kunye nokuzama ukuxelela enye ikati ukuba ihambe.
I-Hissing yenye yezinto eziza kwenziwa ziikati xa ziphazanyiswa zezinye iikati.
Ukuba ikati ibulisa ikati entsha engaqhelekanga, baya kwenza umlozi ukuxelela enye ikati ukuba ibuye umva ize ibashiye bodwa.
Ngokwesiqhelo iikati zihlala zikhuselekile xa zibetha, kodwa unokubona umlo usenzeka ngaphambi kokuba ikati ihlasele enye ikati.
I-Hissing inokuhamba kunye nokugquma.
Amakati anobundlongondlongo omnye komnye, okanye ukuba ikati enye inochuku kwenye ikati, iya kubandakanyeka kuyo ingxolo engxolayo .
Iikati zisenokubhodla xa zixinzelelekile kukho ikati entsha.
Iikati meowukubulisa abantu babo. Ngamanye amaxesha kuya kwenziwa okufanayo nakwezinye iikati nangona kubonwa kakhulu ngamantshontsho ekati koomama.
Enye ingxolo enxulumene namantshontsho yintsinjana eyenziwa ngumama kwiintsana zakhe ukuze zihoye.
Unxibelelwano lwekati ukuya kwiikati
Amakati anobudlelwane obuntsonkothileyo omnye komnye kwaye asebenzise intlalo ngokubanzi ukwenza iimvakalelo zabo zaziwe ngabo bobabini abo bahlala kunye neekati ezingaqhelekanga. Ukuba ufunda ngakumbi malunga nokuba iikati zithetha njani omnye komnye, unokuyiqonda indlela abanxibelelana ngayo kunye nokuhlala, okanye hayi, ekhayeni lakho. Ikwavumela ukuba ungenelele ngokukhawuleza xa ubona ukuba kukho ingxaki kwaye ufuna uncedo lobuchwephesha.
Cheerleading Cheers Ishishini Impahla Yamadoda Diy Ifanitshala Ubambiso Ukuhlawula Amatyala Umtshato Proposals
yintoni into yam yokuzalwa ye-feng shui
uyisayina njani ileta yobungcali
ukuphendula njani xa umntu ekubiza umhle
imithambo yokwakha intembeko kunyango lweqela
ungayiyeka njani into yokuluma injana kunye nokugquma
imisebenzi ehlawula kakhulu kubantwana abaneminyaka eli-16 kufutshane nam